बोधिचित्त: धार्मिक महत्व र खेती प्रविधि - eKishaan
के हो बोधिचित्त ?
नेपालको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तिमाल क्षेत्रमा उत्पति भएको, झट्ट हेर्दा बयरकै एक प्रजाति भित्र पर्ने, स्थानीय वनस्पति हो बोधिचित्त। यो वनस्पति नेपालमा बाहेक संसारका कुनै ठाउंमा पनि पाईदैन । त्यसैले यसलाई अंग्रेजीमा इन्डेमिक टु नेपाल भनिन्छ । बुद्ध धर्मावलम्बिहरुका अनुसार बोधिचित्त विरुवा आठौं शताब्दी तिर गुरु पद्म सम्भम (गुरु रेम्पो छे) लुम्बिनीबाट तिब्बत फर्किने बेलामा तिमालमा तपस्या गरि जान लाग्दा तिमाल क्षेत्रमा रोपेको र स्थानीयलाई चिनाएको किम्बदन्ति रहेको छ । सम्भवतः यसको बीउ र माला गुरु पद्म शम्भवले लुम्बिनीबाट ल्याएको हुनु पर्छ । परम्परागत रुपमा यसको खेती तिमाल क्षेत्रमा मात्र गरिन्थ्यो । नातागोता, इष्टमित्र र आफन्तहरुलाई उपहारको रुपमा यस्को बिउ र बिरुवाहरु दिने गरिएकाले तिमाल आसपासका गाउंहरु जस्तै महाभारत श्र्रीड्खला, काभ्रेकै कोशी पारीका गाउहरु, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा आदि ठाउँहरुमा पनि केही दशक अघिदेखि अलि अलि फैलिएको थियो । यसको धार्मिक तथा आर्थिक महत्व दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । विश्व बजारमा यसको माग धेरै बढेकाले अहिले नेपालका लगभग सबैजसो जिल्लाहरुमा यसको खेती गरिन थालिएको छ । काठमाण्डौका विभिन्न स्थानहरुमा बोधिचित्त फलिसकेकाले काठमाण्डौ उपत्यका र यस्तै हावापानि हुने अन्य स्थानमा पनि यसको खेतित हुनसक्ने देखिन्छ ।
बोधिचित्तको नामाकरण कसरी भयो?
नेपाली भाषामा बोधिचित्त वा बुद्धचित्तको नामले चिनिने यस वनस्पतिलाई तिमाल क्षेत्रमा स्थानीयहरुले बुद्धमाला, माला र फ्रड्वामाला पनि भन्दछन् । तिब्बती भाषामा ठेड्वा माला र चिनीया भाषामा फड.याड्फू थी भनिन्छ । बयर जातको वनस्पतिको वैज्ञानिक वा जेनेरिक नाम जिजिपस र सोहि जात भित्र पर्ने प्रजाती बोधिचित्त भएकाले नेपाली वैज्ञानिकहरुले यसको प्रजातिय नाम बुद्धेन्सिस नामाकरण गरेका छन् । तसर्थ यसलाई जिजिपस बुद्धेन्सिसको नामले विश्वमा चिनिन्छ ।
बोधिचित्तको धार्मिक महत्व?
बुद्धमार्गीहरुले जप गर्दा प्रयोग गरिने पवित्र माला यही बोधिचित्तको १०८ वटा दानालाई उनेर बनाइन्छ । यसको जोड्निमा एउटा अनि ठुलो अतिरिक्त दाना राखिएको हुन्छ, त्यसलाई गरुदाना भनिन्छ । जप र ध्यान गर्दा उच्चारण गरिने मन्त्रको गणनालाई सजिलो बनाउन बौद्ध भिक्षु, न्यासि, ध्यानी र उपासकहरुले यसको प्रयोग गर्दछन् । यसलाई भगवान बद्धसग साक्षात्कार गराउने पवित्र साधन मानिन्छ । बोधिचित्तको मालाबाट जप, ध्यान, मन्त्रोच्चारण र धारण गर्दा चिताएको पुग्ने, सिद्धि प्राप्त हुने, अन्जानमा गरेको पाप काटिने र मृत्यु पछि पनि शान्ति र मुक्ति प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । यसको माला सबै खाले पुजा र जपमा प्रयोग गरिन्छ । यस मालाबाट जप गर्दा परिवार र समाजलाई नै लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । बोधिचित्तको माला बुद्ध भिक्षुहरुलाई दान दिएमा ती भिक्षुहरुले जपगर्दा प्राप्त हुने पुण्य वा लाभको केहि अंश माला दान गर्ने ब्यक्तिलाई समेत प्राप्त हुने विश्वास पनि रहेको छ । घरमा राखिएका बुद्धका मूर्ति, फोटो तथा आफ्ना स्वर्गीय जनहरुको फोटोहरुमा समेत यसको माला लगाइदिने गरिएको छ । विवाह, स्वागत, बिदाइ जस्ता शुभकार्यहरुमा समेत गहना र उपहारका रुपमा यसको माला, ब्रास्लेट, लकेट आदि दिने प्रचलन बढेको छ । यस्को माला दलाई लामाले पनि प्रयोग गर्नु हुन्छ । चिन, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, तिब्बत, भियतनाम, मकाउ, ताईवान आदी देशहरुमा यस्को माग उच्च छ र कम से कम १० बर्ष सम्म यस्को माग उच्च नै रहनेछ ।
बोधिचित्त खेती प्रविधि?
नेपालको तराई देखि २२०० मिटरको उचाइसम्म पारीलो, सेप नलाग्ने, पानी नजम्ने कोरेसाबारी, बगैचा, बारी, पाखो, पखेरो लगायतका जुनसुकै जमीनमा यसको खेती गर्न सकिन्छ । यसको बिरुवा रोपेको २ देखी ३ वर्षमा फल दिन थाल्दछ । कुनै कुनै बिरुवामा बर्षमा दुई पटक पनि फल फल्न सक्छ । यसको वयस्क बिरुवामा २०० केजी सम्म फल फलेको पाईएको छ । २० देखि २५ फिट अग्लो झाडी भएको हुने र एक पटक रोपेपछि पचास वर्ष भन्दा बढी समयसम्म फल फलिरहन्छ ।
रातो माटो र कालो माटो, तथा बलौटे माटो अर्थात सबै खाले माटोमा राम्रो संग हुर्काउन सकिने । तुसारो तथा हुस्सु पर्ने जस्ता कुराहरुले खासै असर पार्दैन ।
बोधिचित्त लगाउने विधि?
२ फीट गहिरो तथा २ फिट गोलाइको खाडल खनेर मल र माटोको मिश्रण राख्ने । त्यसपछि विरुवालाई रोप्ने र आवश्यकता अनुसार सिचाँइ दिने । हिउदको समयमा पानीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने हिउदमा पनि राम्रोसंग यसलाई लगाउन सकिन्छ । स्याहार सुसार राम्रो संग गरेर एक पटक हुर्काएको विरुवालाई हुर्किसकेपछि त्यति धेरै हेरचाह गरिरहन पर्दैन ।
[The Kathmandu Post on Bodhicitta]
एकै रुखको फलबाट २ लाख देखि ९० लाखसम्म आम्दानी हुने हुंदा यसको खेतिगर्ने किसान र ब्यापार गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसरी बढेको व्यापारका कारण काभ्रे र रामेछाप क्षेत्रका किसानहरुको आय र जीवनस्तर धेरै उच्च भएको छ । काभ्रेको तिमाल क्षेत्रमा मात्र वार्षिक करिब २ अरबभन्दा बढीको कारोबार हुन्छ । यसको व्यापार र आम्दानी बढेको कारण देशै भरि यसको खेती गर्ने लहर चलेको छ । माग अनुसार बिरुवा उत्पादन हुन नसकेको र उत्पादन लागत नै महड्गो पर्ने भएकोले एउटै बिरुवा उमेर र साइज हेरेर सातसय देखि दशहजारसम्ममा बिक्रीहुने गरेका छन् । यसका दाना र मालाहरु खरिद गर्न चिन, ताइवान, मकाउ लगायतका धेरै व्यापारीहरु घर घरमा आउने गरेको किसानहरु बताउछन् । नेपालको हालको उत्पादनले बजारको माग धान्न नसकेकाले बजार मुल्य दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसका दानाको सतहमा प्रष्ट देखिने कुशल कलाकारले कुंदेकाजस्ता आकषर्क विभिन्न कोणका चिन्हहरु हुन्छन् । त्यस्ता कोणलाई यसको मुख वा सुर भनिन्छ । मुख बढ्दै गएअनुसार यसको मुल्य पनि पढ्दै जान्छ । हालसम्म एकदेखि आठ मुख सम्मका दानाहरु पाइएका छन् । सात र आठ मुखे राम्रो आकार र गोलाइ भएको एउटै दाना रु.५ देखि १० लाख र आठ र नौ मि.मि गोलाइबाट बनेको दुइ मुखे दानाको एउदै मालाको ३ देखि ४ लाख भन्दा बढीमा बिक्री हुने गरेको छ । तसर्थ अहिलको पहाडि जग्गा बाझो र बन्जर बन्दै गएको अवस्थामा यसको खेती गर्दा किसान तथा राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
Previous articleखरायो पालन : एक लाभदायक व्यवसाय
Next articleZero Budget Natural Farming: Approach towards Sustainable Agriculture